के तपाईलाई गाडी चढ्दा बान्ता आउँछ ? त्यसोभए यसो पो गर्ने कि !
तपाई हामी मध्ये कतिजनालाई गाडी चढ्दा वाक्वाकी वा बान्ता आउने समस्या हुन्छ । विशेषगरी धेरै घुम्तिहरु भएको अप्ठेरो बाटोमा वान्ता आउने सम्भावना बढि हुन्छ । यदि तपाईं पनि यो समस्याबाट पिडित हुनुहुन्छ भने यी विधिहरुले तपाईंलाई राहत दिन सक्छन्
– गाडीमा यात्रा गरिरहँदा किताब पढ्ने वा मोबाइल चलाउने नगर्नुस । यसो गर्दा चक्कर लाग्छ र पेट बटार्छ ।
– यात्रामा निस्कँदा पेट खाली नराख्नुस । साथै पेट टन्न हुने गरी भारी चिज पनि नखानुस । अमिलो(पिरो खानेकुराबाट पनि टाढा रहनुस । यस्तो खानेकुरा पच्न समय लाग्ने भएकाले यात्रा गर्दा असुविधा हुन सक्छ ।
– यदि कारमा यात्रा गरिरहनु भएको छ भने सम्भव भएसम्म अगाडिको सिटमा बस्नुस । अगाडि बस्दा चक्कर लाग्दैन ।
– आफ्नो रुमालमा पुदिनाको तेलको केही थोपा छर्किनुस र यात्रा गर्दा बारम्बार सुँघिरहनुस । यसको अलावा पुदिनायुक्त चिया पनि पिउन सक्नुहुन्छ ।
– गाडी चढ्दा मुखमा अदुवाको सानो टुक्रा वा चकलेट राख्नुस । यसबाट वान्ता आउने जोखिम कम हुन्छ । यसका अलावा यात्रा गर्नुपूर्व अदुवा राखिएको चिया पिउनाले पनि फाइदा मिल्छ ।
– गाडीको झ्यालको शीशा ड्यामडुम बन्द नगर्नु । गाडीभित्र हावा पस्न दिनुस ।